News - MUUQAALKA CAYAARKA
Laga soo bilaabo aasaaskeedii 2007 ilaa 2014, JOJO wuxuu ku jiray marxaladda aasaasiga ah muddo 7 sano ah, wuxuu si adag uga shaqeynayay mugdiga oo wuxuu urursanayay xoog joogto ah. Marka la gaaro 2014, JOJO, oo ah nooc warqad sawir leh, ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo caan baxday suuqyada caalamiga ah, iyadoo sumcadeeda iyo iibkeeduna ay sii kordhayaan sanadba sanadka ka dambeeya. Hadda, waxay gashay marxaladda horumarka degdegga ah. Ka dib 12 sano oo ay kobcineysay sumadda JOJO, geedku aakhirkii wuu koray
Waraaqda sawirka JOJO waxaa hadda laga heli karaa in ka badan 60 waddan oo adduunka ah .Bandhigan waxaa si weyn u jecel macaamiisha Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika iyo Koonfur-bari Aasiya. Macaamiil badan ayaa taga dukaamada qaar si ay u soo iibsadaan warqad sawir leh waxayna cadeeyaan inay u baahan yihiin inay iibsadaan warqad sawir leh oo ah nooca JOJO. JOJO waxay lamid noqotay waraaqaha sawirada ee aagaggaan. Sababta oo ah tayada wax soo saarku way wanaagsan tahay, sanadihii ugu dambeeyay waraaqda sawir ee JOJO ee Yurub iyo Mareykanka iyo dalal kale oo horumarsan iibintooda sidoo kale si xawli ah ayey u kordhayaan .Hadda sumadda JOJO, sumcadeeda iyo saamiga ay ku leedahay suuqyada dibedda waxay ku jirtaa warshadaha waraaqaha sawirrada oo aad uga horreeya booska. Wuxuu noqday halbeeg lagu cabiro warshadaha。
Sidaa darteed, taageerada adag ee shirkadda iyo istiraatiijiyaddeeda, Changli Yuancheng waxay si xoog leh u horumarineysaa dhaqankeeda shirkadeed, waxay kobcisaa wanaag, rajo wanaagsan, midnimo iyo kor u qaadista dhaqanka shirkadaha, waxayna macaamiisha u qaadataa inay tahay xarunta si ay u abuurto muuqaal wanaagsan oo shirkadda ah. Shaqaalaha sida xarunta, in la abuuro jawi iswaafajinaya dadka u janjeedha; U qaado shirkadda sida xarunta, dejiso sawirka wanaagsan ee shirkadda, caddee horumarka iyo ujeeddada ujeeddada shirkadda, iyo dhisidda nidaamka silsiladda qiimaha adag ee " waxaan nahay isku-tiirsanaan, waxaan u nahay qof walba, qof walba aniga ". Dhismaha dhaqanka shirkadaha wuxuu si weyn u xoojiyay isku-xirnaanshaha iyo xoogga dhexe ee shirkadda, sidaas darteedna si wax ku ool ah ugu ololeynaya dib-u-habeynta iyo horumarinta Shirkadda Changli Yuancheng.
Warqad Wareejin Hufan, Warqad T-Shirt ah, Warqad Sawir ah oo dhalaalaya oo dhalaalaya, Waraaq Madoow, Daabacaadda Warqad Sawirro ah, Warqad Bir ah oo loogu talagalay Shaati,